May 21, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : ८३ हजार बढी मत गन्दा यस्ताे छ रेनुकाे अवस्था !
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धन तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहालले आफ्ना निकट प्रतिस्पर्धीको तुलनामा झन्डै सात हजार मतको अग्रता लिएकी छन्। यहाँ अहिलेसम्म ८३ हजार १ सय ११ मतगणना पूरा भएको छ। त्यसमध्ये दाहालले ३२ हजार ५ सय १९ मत ल्याएकी छन् भने उनका निकट प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले २५ हजार […]
काठमाडाैं महानगर : सुनिता डंगोलले कटाइन् ३४ हजार मत
May 21, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगर : सुनिता डंगोलले कटाइन् ३४ हजार मत
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पदका लागि नेकपा एमालेकी सुनिता डंगोलले ३४ हजार बढी मत पाएकी छन्। उनले आफ्नो अग्रता कायम राख्दै आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग फराकिलो मतान्तर बनाएकी हुन्। राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी मतगणनामा शनिबार साढे नौ बजेको विवरण अनुसार उनले ३४ हजार ३० मत प्राप्त गरेकी हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका […]
काठमाडौं महानगरमा १ लाख मतगणना : हेर्नुस् कसको मत कति ?
May 21, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौं महानगरमा १ लाख मतगणना : हेर्नुस् कसको मत कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको मतगणना जारी छ । १ लाख ३४ मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको अग्रता कायमै रहेको छ । उनले ३६२२६ मत ल्याएका छन् । यस्तै कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १९९१० मत पाएकी छन् । एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितले १९८५० मत पाएका छन् । पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका आचार्य तीन हजार २७२ मतले अगाडि […]
एमालेबाट विजयी कलैयाका मेयरलाई उनकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत !
May 21, 2022 N88LeaveaComment on एमालेबाट विजयी कलैयाका मेयरलाई उनकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत !
बारा । बारा सदरमुकाम कलैया उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर विनोद साह र उपमेयर रौशन प्रविनलाई समर्थकले उनीहरुकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत गरेका छन् । वडा नं १० का वडाध्यक्ष मोहमद सबिरले पनि यो स्वागत पाएका छन् । चुनाव जितेर विजयी र्‍यालीमा वडा नं। मा पुगेका तीनै जनालाई महमद गजनी ठकुराईले उनीहरुकै तौल बराबरको लड्डुले स्वागत गरेका हुन् […]
धरान अपडेट : हर्क साम्पाङले फराकिलो पारे मतान्तर, कसकाे कति ?
May 21, 2022 N88LeaveaComment on धरान अपडेट : हर्क साम्पाङले फराकिलो पारे मतान्तर, कसकाे कति ?
धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले दोस्रो नम्बरमा रहेका नेपाली कांग्रेसका किशोर राईसँगको मतान्तर फराकिलो पार्दै लगेका छन्। शनिबार साँझसम्म गणना भएको ५० हजार १ सय ९ मतमध्ये साम्पाङले १६ हजार २६ मत पाएका छन् भने सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका राईले १३ हजार १८२ मत पाएका छन्। निवर्तमान उपमेयरसमेत रहेकी एमालेकी […]
भरतपुर अपडेट : भुइँकटरले सबैलाई चकित पार्दै, कसकाे मत कति ?
May 21, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : भुइँकटरले सबैलाई चकित पार्दै, कसकाे मत कति ?
काठमाडौं । भरतपुरको चितवनमा ८० हजार १० मत गणना भएको छ । जसमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले अग्रता कायमै राखेकी छन् । रेनुले ३१ हजार ६७१ मत पाएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका विजय सुवेदीले २५,०१० मत ल्याएका छन् । रेनु ६,६६६ मतले अगाडि छिन् । स्वतन्त्र उमेदवार जगन्नाथ पौडेलले ११ हजार ०९६ मत […]
६९१ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीले कति जिते ?
May 21, 2022 N88LeaveaComment on ६९१ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टीले कति जिते ?
काठमाडौं । वैशाख ३० गते भएको ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९१ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मतपरिणामले नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा २९४ स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको नेकपा एमाले अहिले १८८ स्थानीय तह जितेर दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो पटक २६६ […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् आइतबारकाे राशिफल !
May 21, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् आइतबारकाे राशिफल !
मेष राशि : नयाँ काममा लाभ मिल्नेछ। उत्साहजनक जानकारी पाउनुहुनेछ। बिर्सिएका साथीहरू भेट्नुहुनेछ। अनावश्यक खर्च हुनेछ । ठूलो काम गर्न मन लाग्नेछ। व्यापारमा लाभ हुनेछ । शेयर बजार तथा म्युचुअल फण्ड आदिबाट अनुकुल लाभ मिल्नेछ । दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ । आत्मसम्मान कायम रहनेछ। वृष राशि : चोटपटक र रोगका कारण अवरोधहरू सम्भव छन्। समस्यामा नपर्नुहोस्। […]
पोखरामा अग्रता बढाउँदै धनराज र मञ्जु
May 21, 2022 N88LeaveaComment on पोखरामा अग्रता बढाउँदै धनराज र मञ्जु
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा ८८ हजार ४५७ मतगणना भएको छ । महानगर प्रमुखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्यले ३५ हजार ५८७ मत प्राप्त गर्दै अग्रता जारी राखेका छन् । उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा (एमाले)का कृष्ण थापाले ३२ हजार ३२५ मत ल्याएका छन् । गठबन्धनका साझा उमेदवार आचार्य थापाभन्दा ३ हजार २६२ मतले अघि छन् । यस्तै, राप्रपाका शंकर खनालले […]
काठमाडौंमा ९३ हजार ६४७ मतगणना : कसकाे कति मत ?
May 21, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा ९३ हजार ६४७ मतगणना : कसकाे कति मत ?
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत काठमाडौ महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म ९३ हजार ६४७ मतगणना गरिएको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)को ३४ हजार १३० मतसहित अग्रता फराकिलो बन्दै गएको छ । नेकपा (एमाले)का उमेदवार केशव स्थापित १८ हजार ५४७ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन् । नेपाली कांग्रेसकी उमेदवार सिर्जना […]